Best Android File Nyefee Alternative maka Mac
Part 1.What Alternative ka Android File Nyefee guzo?
Part 2.How Jiri Android File Nyefee Alternative maka Mac?
Gịnị mere Mkpa Android File Nyefee Alternative?
Android File Nyefee bụ a free usoro ihe omume Macintosh kọmputa na-agba ọsọ Mac OS X 10.5 na mgbe e mesịrị. Ọ na-enyere efego gị Android ekwentị ma ọ bụ na tebụl dị ka ihe mpụga ike mbanye. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịme nchọgharị ma na-eme faịlụ nyefe si Android ka Mac, na Anglịkan. Download Android File Nyefee maka Mac >>
Ebe ọ bụ na Android File Nyefee na-ahapụ gị nyefee ma hichapụ faịlụ na na Android ekwentị na mbadamba, gịnị mere ị na-ahụ ka onye ọzọ otu? A free usoro dị ka ọ bụ, na ọ bụ adaba n'ihi na ị na jikwaa Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na Mac, ma ọ nwere ụfọdụ drawbacks.
Naanị dakọtara na Android ngwaọrụ-agba ọsọ Android 3.0 ma ọ bụ mgbe e mesịrị.
Ọ pụghị ịbụ ojiji mgbe ị rụnyere Samsung Kies on Mac.
Mgbe ụfọdụ, ọ na-ada ada na-ịchọpụta Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba.
Gịnị Alternative ka Android File Nyefee guzo?
Nri ye Android File Nyefee ma na-achọ ka onye ọzọ? I nwere ike na-achọ inye a dị ike ọzọ ka Android File Nyefee - Wondershare TunesGo (Mac) - a ogbugba. Ọ na-tumadi ji n'ihi na ị na were were jikwaa gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba on Mac ma ọ bụ PC. N'okpuru ebe a bụ ya atụmatụ nke karịrị echiche karịrị Android File Nyefee. e
Olee otú Jiri Android File Nyefee Alternative maka Mac?
Nzọụkwụ 1. Download na-agba ọsọ Wondershare TunesGo on Mac
Pịa Download bọtịnụ n'okpuru iji wụnye a software na Mac. Jikọọ gị android ngwaọrụ Mac na eriri USB. Ngwaọrụ gị ga-adịghị anya ghọtara. Na-agba ọsọ ya. Mac ga-echetara gị ọsọ iTunes kwa. Na-agba ọsọ iTunes dị ka a gwara gị. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ Wondershare TunesGo ga-egosipụta na n'akụkụ aka nri nke iTunes.
Nzọụkwụ 2. mmekọrịta iTunes ka Android
Pịa mmekọrịta taabụ na-egosi mmekọrịta panel. Ego Niile n'ọbá akwụkwọ ma ọ bụ họrọ listi ọkpụkpọ ka mmekọrịta music, fim na listi ọkpụkpọ site na iTunes ka Android.
Nzọụkwụ 3. Nyefee Data si Mac ka Android
Ọfọn, ọ bụrụ na ị nwere nza nke photos, fim, songs on Mac na ga-amasị ekele maka ha na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba, i nwere ike iji TunesGo software ịgbakwunye ha gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba.
Pịa emeghe Android Finder windowto emeghe Android Finder window. Mgbe ahụ, Dọrọ na dobe faịlụ site na Mac ma ọ bụ iTunes ka Android Finder nyefee gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba.
Nzọụkwụ 4. Nyefee Files si gam akporo ka Mac / iTunes
Ọ dị mfe nyefee data gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba ka Mac ma ọ bụ iTunes. Dị pịa emeghe Android Finder windowto emeghe Android Finder window. Mgbe ahụ, họrọ gị chọrọ faịlụ, na ịchịkwa pịa. Na mmapụta dialog, pịa Export ka Mac ma ọ bụ Mbupụ na iTunes.
Jikọọ Android ka Mac na nyefee faịlụ
Best 3 iTuens Alternatives maka Android
> Resource> Android> Best Android File Nyefee Alternative maka Mac